Ihe ngosi vidiyo nke 2016 | Akụkọ akụrụngwa
Nke mbu, ebe obu Mundivgames Anyị chọrọ ikele afọ ọhụrụ ahụ nye ndị enyi anyị niile na-agụ akwụkwọ ma chọọ ka ha bụrụ ihe kacha mma maka afọ 2016. Nke ahụ kwuru, ọ ga-anọgide na-ehicha aka anyị n'ihu ọnwa ole na ole nkwa ahụ, na ọtụtụ, n'ime panorama nke egwuregwu vidio: Anyị nwere ezigbo ndepụta jupụtara na ihe mere anyị ga-eji chee na 2016 a wepụtara ọhụrụ ga-abụ oge kachasị mma nke ọgbọ nke ugbu a nke consoles.
Anyị nwere nkwuputa dị ike enyere maka afọ a, gụnyere aha ndị dị ka esemokwu ahụ Ikpeazụ Guardian, nke ga-emesị hụ ìhè n'ime PlayStation 4 mgbe na-agbanwe mmepe ikpo okwu, ma ọ bụ mbata nke ọhụrụ ọnụ na nwunye nke Final Fantasy, Mass Mmetụta Andromeda ma ọ bụ nke a na-atụsi anya ya ike The Akụkọ Mgbe Ochie nke Zelda na Wii U -nweghị echefu nke ahụ Nintendo kwesiri iweputa usoro ohuru ya n’ime 2016-.
ọnụ ọgụgụ agbụ
Egwuregwu ọhụrụ nke Egwuregwu Platinumna Hideki kamiya Na isi, ọ ga-ebuga anyị na ụwa mepere emepe jupụtara n'okike dị egwu ma jupụta na omume nke anyị nwere ike iji nnukwu dragọn na-emekọrịta ma ọ bụ chee ihu na iji ikike dị iche iche. Aha a ga - abụ naanị Xbox One.
Team Ninja, Mgbe ya Nwụrụ anwụ ma ọ bụ Ndụ 5 na nyocha dị iche iche, ọ ga-alaghachi na egwuregwu na-agwakọta njem na omume, edobere na narị afọ nke XNUMX Japan. Na ileba anya mbu, odi ka ngwakọ n’etiti Onimusha y ọchịchịrị Mkpụrụ Obi, ọ bụ ezie na ọ ga-enwe ọtụtụ ihe eserese aka karịa egwuregwu ndị ahụ, na-ekpe ikpe site na ihe anyị hụrụ na ihe eji eme egwuregwu. Ọ bụrụ na ị chọrọ igwu Na-Oh, ị nwere ike ịme ya naanị PlayStation 4.
Kwadobe nke War 4
Kwadobe nke War 4 Ọ ga-abụ mbụ mbụ egwuregwu na usoro na ọ ga-eme Mmekọrịta, ọmụmụ nke Microsoft tọrọ ntọala na naanị ebumnuche nke pamper a saga mgbe nnweta ya site na Redmond. Ọ ga-abụ a sequel ka Kwadobe nke War 3, egwuregwu ahụ nke kwụsịrị agha megide Igurube, ma mee ka ndi ohuru ohuru ohuru, ghara ileghara ihe ndi ozo nke aha, dika ihe ndi ozo, nkpuchi usoro na ngwa agha dika Lancer enweghi ike. Naanị maka Xbox One.
Isi nke ikpeazụ toro nke saga Nkịta na-adịghị mma O yiri ka ọ ga-ejedebe na njedebe ya na nke a agafetụbeghị 4, nke ga-abụ na ụlọ ahịa na njedebe nke ọnwa Eprel ọ ga-abụ otu n’ime ihe kpatara ọtụtụ ji nweta a PlayStation 4: Enweghị ndị Fans ole na ole na chatty nke Nathan Drake n'ọgbọ gara aga.
Edere Edere: Mkpali
Mgbanwe nke egwuregwu ahụ gwakọtara ogige na omume ga-abịa PC, egwuregwu PlayStation 4 y Xbox One el 24 maka Mee, na akụkọ ohuru, ihe eji egwu egwu, na ihe ịtụnanya.
Thegha banyere aha Capcom laghachi na isi nke ise nke naanị enwere ike igwu PlayStation 4 y PC -magbanyeghi na anyi ga ahu ihe gha eme n’odinihu-. Ndị agha a ma ama, dịka Ryu, Ken, Chun-Li ma ọ bụ M. Bison gbagọrọ agbagọ ga-ekewa ihu ha site na mgbakwunye ọhụrụ na aha nke na-ekwe nkwa inye onye ọzọ ntụgharị na egwuregwu nke IVFS na ga nzọ na a oge a ọdịnaya lokpọghe usoro na mmelite. Can nwere ike ịchọta Fighter V n'ụlọ ahịa 16 maka February.
Deus Ex: Mankind Kewara
Mgbe ihe ịga nke ọma nke Mgbanwe nke mmadụ na 2011, edos ga-alaghachi na cyberpunk ụwa na Deus Ex: Mankind Kewara dị ka a kpọmkwem sequel. Adam Jensen Ọ ga-ekwughachi dị ka onye na-akwado ya na ndị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ ga-etinye mmegharị ọhụrụ maka ya, onye ga-eche ndị otu na-eyi ọha egwu ihu mgbe ha na-ekpughe izu ọjọọ ọzọ.
Ọchịchịrị Mkpụrụ Obi III
Ọhụrụ nkeji nkeji ọchịchịrị Mkpụrụ Obi kwere nkwa ịlaghachi onye ọkpụkpọ ahụ n'oké osimiri nke mmekpa ahụ, ọnyà, ndị iro na-egbu egbu na otu puku na otu ọnwụ. Site na ngwanrọ mee ka a Ọchịchịrị Mkpụrụ Obi III bụrụ ihe ngwụcha aka iji mechie saga a -ma ọ bụ opekata mpe ka ọ zuo ike nwa oge-, yabụ ha etinyela anụ niile na imi ihe iji nye ahụmịhe kacha sie ike ị nwere ike ịchọta PlayStation 4, Xbox One y PC site na Machị 24.
Ihe omuma ihe omuma ozo nke emelitere iji kwado oge a. Ọhụrụ a Rome Ọ ga-enye ọgụ na-agba agba megide ihe ndị siri ike ị ga-eche n'echiche, na-ejigide ọnụnọ nke nnukwu anụ ọhịa ahụ, ngwa ọgụ ndị ọzọ nwere njiri mara ya. Iji curl na curl, ọ ga-enwe a larịị nchịkọta akụkọ.
Nke na-esote nke usọbọ, ndị dere Alan Tetanụ ma ọ bụ Max Payne malite, a na-akpọ ya kwantum ezumike ọ ga-abata naanị maka Xbox One. A ga-agwakọta mgbọ sitere na agbapụ ya na ahịrị aghụghọ sci-fi na ihe ngosi nke ọtụtụ ndị egwu nke njikwa nke Microsoft ha nwere olile anya di elu. You ga-adaba na mama?
Final Fantasy XIII Ihe transmmiri wee buru Final Fantasy XV, na-aga ịbụ egwuregwu na-enweghị atụ nke PlayStation 3 ka a ga-ewepụta ya dịka mmemme mmemme ọtụtụ, nke, dịka Square-Enix, ga-akụ ụlọ ahịa otu 2016. Aha a chọrọ ga-akpọrọ anyị gaa ụwa efu efu na egwuregwu egwuregwu na-echetara banyere saga Alaeze Obi ma ọ bụ nwe Final Fantasy 0dị XNUMX. Obi abụọ adịghị ya, ọ ga-abụ otu n'ime egwuregwu nke afọ a nke ọtụtụ anya ga-agbado.
Otu nke emegoro ịrịọ: ọ dị ka, n'ikpeazụ, The Division ga-abịa PlayStation 4, Xbox One y PC el Machị 8. Aha njirimara a ga - abụ otu n’ime nnukwu nza nke Ubisoft maka 2016, ọ bụ ezie na dịka ọ na-adịkarị na ndị na-adọkpụ gala, egwuregwu ha na-ele anya na vidiyo ndị ahụ karịa mgbe e mesịrị mgbe anyị nwere ha n'aka anyị.
Ọzọ nke yiri ka ọ gaghị abịa ma ọlị, Ọ dịghị mmadụ Sky na-achọ ịbụ otu n’ime egwuregwu egwuregwu indie kachasị ike nke afọ 2016. Anyị ga-ahụ ihe atụmatụ ya ga-adị ụtọ nke na-anọgide na-agagharị na mbara ala na-enweghị ngwụcha, nke ọ bụla nwere ọdịdị ya -ihe dịka flora na fauna-. O nwere ike ịbụ ezigbo bọọlụ Ndewo Egwuregwu ma ọ bụ echiche dị oke ọchịchọ: anyị ga-echere ruo mgbe ọnwa June iji lelee ya, na PS4 o PC.
Mgbe o kpachara ìsì na saga Killzone -ma karịsịa na nkeji nkeji ọhụrụ-, ndị mmadụ okpuru Games na-akwadebe ihe emereme egwuregwu na RPG metụrụ, nke ga-ewere ọnọdụ na ụwa mepere emepe jupụtara na ihe ndị e kere eke na-egbuke egbuke. Ọ ga-abụ ụlọ ọgụgụ izizi izizi ọgụgụ isi nke ụlọ kemgbe 2004 wee gbalịa ịbụ otu n'ime ihe ndị kachasị mma PlayStation 4 nke 2016.
Agbanyeghị na amaara ya ọkwa na 2009 yana ọtụtụ ndị ọrụ chọsiri ike inwe ya PlayStation 3Ọ dị ka ọ ga-abụ na 2016 mgbe anyị mechara nwee ọ enjoyụ egwuregwu nke atọ akpọrọ Otu Ico, ma na nke ugbu a PlayStation 4. Dị ka onye nduzi ya si kwuo, Anwụrụ ọkụ Ueda, anyị ga-amata igwe dị n’aha ha gara aga -ICO y Onyinyo nke Colossus- mgbe ị na-achịkwa protagonist nke egwuregwu ahụ, tinyere nnukwu akụkọ ifo nke ga-abụ isi ihe na njem ahụ.
emenye ihere 2
Mgbe ihe ịga nke ọma nke Emechu ihu, Bethesda alaghị azụ inye akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ìhè ka Arkane Studios ịzụlite ihe na-atọ ụtọ nke ukwuu, ebe onye ọkpụkpọ ahụ nwere ike ịhọrọ ụdị egwuregwu ha, ma ọ bụ lekwasịrị anya na stealth ma ọ bụ ọgụ ihu, yana ịhọrọ n'etiti ndị isi okwu abụọ, ndị ga-ebi njem ahụ site n'echiche dị iche iche: Emily kaldwin - eze nwanyị - ma ọ bụ Ụlọ ọrụ Corvo Attano -dike nke egwuregwu gara aga-.
Mass Mmetụta: Andromeda
Obi abụọ adịghị ya, aha ọzọ kachasị atụ anya maka consoles ọgbọ ọhụrụ. Mass Mmetụta: Andromeda ga-eme na galaxy nke otu aha ahụ na-etinye mkpado na aha a nke BioWare, a ga-ahụrịrị ma ọ bụrụ na ejiri aka ya tufuo ahụhụ mgbe ọ jikọtara ọnụ Electronic Arts, nke a agaghị emetụta egwuregwu ahụ.
Akụkọ banyere Zelda Wii U
Ọ kwesịrị ịbịa 2016 a, ma ọ bụ kwuo ya Nintendo, na mgbakwunye na nke a Zelda, na-ezube ịmalite maka Wii U a remastered mbipute nke Akụkọ banyere Zelda: Twilight Princess, egwuregwu nke Egwuregwu Cube na e wepụtara azụ na mbubreyo 2006 -and na-adaba adaba n'ọdụ ụgbọ mmiri iji sikwuo mwepụta nke Wii-. Anyị amachaghị banyere ihe ọhụrụ a Zelda, ebe ọ bụ na ha egosiwo anyị mgbe niile obere sekọnd nke egwuregwu na mgbe niile na otu akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ahịhịa, ọ bụ ezie na dị ka Eji Aonuma, ga-abụ aha kachasị nwee ọchịchọ nke nintendera saga a. Hà ga-emeghachi otu egwu ahụ Twilight adaeze ma n'etiti Wii U y Nintendo nx?
Anyị ekwesịghị ichefu aha ndị ọzọ ga-abịarute afọ a, nke a ga-elekwasịkwa anya ọtụtụ n'ime gị: Overwatch (PS4, Xbox One, PC), Akara akara ọkụ (3DS), Firewatch (PS4, PC), Hitman (PS4, Xbox One, PC), XCOM 2 (PC), Ofwa nke Warcraft: Legion (PC), Persona 5 (PS3, PS4), Obi Ike Nke Abụọ: Njedebe Ọgwụgwụ (3DS), Dragọn ahụ Quest nke Asatọ (3DS), mafia 3 (PS4, Xbox One, PC), Dị Ike Nke 9 (PC, PS4, PS3, Wii U, PS Vita, 3DS, Xbox 360, Xbox One), Ndị Na-achọ Dragọn ahụ (PS4, PS3, PS Vita), 2 Nwụrụ Anwụ (PS4, Xbox One, PC), Homefront: Mgbanwe (PS4, Xbox One, PC), ma ọ bụ Tekken 7 (PS4, Xbox One, PC), ụfọdụ ga-enwe ibu ha na 2016.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Egwuregwu vidio nke 2016
6 zuru oke onyinye dijitalụ maka Kingsbọchị Atọ nke Atọ